भाद्र २१, २०७५ सम्पादकीय
काठमाडौँ — जमिनबाट हावामा छलाङ मार्नु । हावामा कावा खाँदै फेरि जमिन टेक्नु । त्यसरी नै नेपाल छोटो तयारीमा एसियाड गयो । प्याराग्लाइडिङलाई पनि समावेश गर्ने भनिएपछि गत माघदेखि तयारी थालिएको मात्र थियो, पहिलो खेपमै रजत पदक आयो ।
व्यावसायिक उडानका ग्लाइडर नै यसका व्यावसायिक खेलाडी । नेपाल पाराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघका पदाधिकारीकै उत्साहमा नेपालले सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो । सबै ग्लाइडर आफ्नै ग्लाइडरसहितको सरसामानसहित जकार्ता उडे ।
त्यसो त एसियाली खेलकुदका डेब्यु खेलमा नेपालले कुनै न कुनै पदक जित्ने गरेको छ । सन् १९९६ सोल एसियाडमा तेक्वान्दो र बक्सिङले पदक जिते । सन् १९९४ का हिरोसिमा एसियाडमा कराँते । तेक्वान्दो, बक्सिङ र कराँतेमा एसियाड पदक हामीले जित्यौं तर अरू देशले आफूलाई सुधार्दै लगे, हामी जहीँको तहीँ ।
यसपटक पनि नेपालले पहिलो ‘इन्ट्री’ मै बाजी मार्‍यो । त्यस्तो खेलमा जसलाई हिजोसम्म खेल नै होइन भन्ने गरिन्थ्यो । बीस वर्षअघि त हो, केही विदेशी पारासुट बोकेर सराङकोटबाट पोखरातिर हामफाले । चिलजस्तै एकनासले उड्दै फेवा किनार ओर्लिए । पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सोचे, यस्तो पनि सम्भव छ ? बिरु बम्जन त्यतिखेर ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखराका अध्यक्ष थिए ।
बेलायती पर्यटक एडम हिलले सराङकोटबाट पाराग्लाइडिङ गर्न सकिने सम्भावना देखाए । उनीहरू मिलेर पदयात्रारत विदेशी पर्यटकलाई पाराग्लाइडिङ गराए । सन् २०१० तिरबाट पाराग्लाइडिङ व्यावसायिक बन्यो । सराङकोटसँगै तोरेपानी र मान्द्रेढुंगाबाट । अब त धरान, स्याङ्जा, बन्दीपुर, पाल्पा, काठमाडौं र सुर्खेतमा पाराग्लाइडिङलाई अनुमति ।
पोखरामै ६२ व्यावसायिक पाराग्लाइडिङ कम्पनी भइसकेका छन् । ती कम्पनीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त ३ सय पाइलट छन् । खेलकुदमा सहभागी हुन नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) बाट छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसरी लाइसेन्स लिने पाइलट २५ मात्रै छन् । उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले त पाराग्लाइडिङ तालिम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि स्कुल स्थापना गरिसकेको छ ।
धन्य हो, सन् २००४ देखि युवा पुस्ता आकर्षित भए । देशभित्रै पाइलट उत्पादन भएपछि सन् २०१० यता यो साहसिक खेलमा दरियो । अहिले बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकले पाराग्लाइडिङ धानेका छन् । विदेशी पाइलटलाई पनि नेपालीले विस्थापित गरेका छन् । २००८ सम्म यसलाई खेल नै होइन भनिन्थ्यो, राखेपबाट मान्यता नपाउन्जेल ।
चासो त सरकारले अझै दिएको छैन । व्यवसायीले नै रकम उठाएर खेलाडी पठाउँदै आएका छन् । एसियाडमा मात्रै केही सक्रियता देखियो । केही महिनाअघि चीनमा भएको प्रि–वल्र्डकपमा विशाल थापाले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । इन्डोनेसियामै भएको प्रतियोगितामा नेपाल टिम च्याम्पियन बनेको थियो । यसबारे सरकारी नीति छैन भन्दा पनि हुन्छ । राज्यको लगानीबिनै पहिलोपटक यति ठूलो पदक जितिएको हो ।
पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी खेल पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई प्याराग्लाइडिङ गरेर कमाएका छन् भनेर मात्र सोच्नु हुँदैन । प्याराग्लाइडिङ कहाँ–कहाँ सम्भव छ भनेर व्यवसायीहरू आफैंले अनुसन्धान गरेका छन् । राज्यले सुको खर्च गरेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम विमानस्थल मात्र बनाउने होइन, हवाई व्यवसाय विस्तार गर्ने पनि हो ।
पर्यटन व्यवसाय र खेलका लागि हवाई क्षेत्र छुट्टै तोकिदिनुपर्ने भइसकेको छ । सुन्दर देशमा यस्तो साहसिक खेल हेर्न को आउँदैन ? निश्चित क्षेत्र निर्माण गरियो भने विदेशी खेलाडी पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनुअघि अभ्यास गर्न यहाँ आउन सक्छन् । यतै मनोरञ्जन गर्छन् । उनीहरूको आगमनले अरू पर्यटकलाई पनि लोभ्याउन सक्छ । व्यवसायीहरूले देखेको यस्तो सपना सम्भव छ । राज्यले होस्टे गरिदिने हो । होम स्टे जनताले गराउँछन् ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:१३